ချီလီ နှင့် သူ၏ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » ချီလီ နှင့် သူ၏ …	6
ချီလီ နှင့် သူ၏ …
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 21, 2015 in Food, Drink & Recipes |6comments
ဒီတစ်ခါတော့ သများ လဲ ဟင်းချက် ပြဗျစီ။
တို့ မြန်မာများ ရဲ့ အကြိုက်တော့ ဟုတ်မယ် မထင်။
မူရင်း က ဘယ်က မှန်းမသိ ပေမဲ့ တောင်အမေရိက နိုင်ငံ တွေ ဘက်က ဆင်းသက်လာမယ် ထင်တာဘဲ။
Chili con carne (သို့) Chili လို့ ခေါ်ကြတယ်။ chili with meat ပေါ့။
အသားစင်းကော (အများအားဖြင့် အမဲသား) ထဲ ပဲကတ္တီပါ နဲ့ ခရမ်းချင်သီး ၊ ငရုတ်သီး နိုင်ချင်းထည့်ပြီး ချက်တာပါ။
ရိုးရိုးလေး နဲ့ အဆီတွေ မပါလို့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ညီ မယ် လို့ ပြောလို့ ရမယ်။
ထမင်းဖြူ (သို့) နံပြား လို နဲ့ တွဲစားနိုင်တယ်။
ရှု ပြီး စား တော် မူကြပါ။
အမဲသား စင်းကော ၅၀၀ ဂရမ် နဲ့ ကြက်သွန်နီ သုံး လုံး လှီး ပြီး ရောပါတယ်။
အမဲသား နဲနဲ ညိုရောင်သမ်း လာရင် ခရမ်းချဉ်သီး ထဲ့ပါတယ်။
Red Kidney လို့ ခေါ်တဲ့ ပဲကတ္တီပါ ထည့်ပါတယ်။
ဒီ Tin ဗူး တွေကို အလွယ် သုံးပါတယ်။
ဂျုံ မှုန့် ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ဇွန်း ထည့် ပြီး မွှေထားတာပါ။ ပြီး ရင် အိုးထဲ ထည့် ပြီး မွှေပေးပါ။
အမွှေးအကြိုင် ကြိုက်သလို ထည့်ပါ။ ငရုတ်သီး နံချင်း သုံးပေမဲ့ ကလေး က မစားနိုင်လို့ အမှုန့်လေး နဲနဲ ဘဲ ထည့်ပါတယ်။ တကယ်ဆို အတောင့်လိုက် ထည့်ကြပါတယ်။
ရှု ပြီး “စား” တော် မူကြပါကုန် လော့။ မဝကြမှာ စိုး လို့ ထမင်း ကို နှစ်လုံး ပုံထားပေးတယ်။ :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: http://mandalaygazette.com/201203
ဒါ တွေက သများရဲ့ ရိုက်လာတဲ့ ငရုတ်ပင်တွေ လာပြတာ။
ဟင်းချက်နည်းထက် အလှဆင်တတ်တဲ့ မြကို ပိုချစ်သွားပြီ။
အမဲသားကို မစားသာမစားဖြစ်တာ ကြိုက်တယ်ရယ်။
အောင် မိုးသူ says: စားချင်စရာလေးပဲ အဲ့မှာတော့ အဲ့လို ဘူးတွေ ဘာတွေ ၀ယ်ရတာ အဆင်ပြေပေမယ့် ဒီမှာတော့ ဈေးအနည်းငယ် ကြီးနေသလိုရှိတော့ သိပ်ဝယ်မသုံးနီုင်သေးဘူး.။
ဦးကျောက်ခဲ says: အမဲသားလည်းကြိုက်တယ်… အစပ်လည်းကြိုက်တယ်…
အဲသည့်လို စိုစိုလေးဆို နံပြားနဲ့လိုက်မယ်ထင်ရဲ့… ရှလွတ်စ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အဲသလောက်နဲ့ ဝဘူးဗျ
မြစပဲရိုး says: အားလုံးဘဲ ကျေးဇူးပါ။ :း))
ဇီကလေး – ရွာထဲ ဒီလောက် စူပါ ထရူပါ တွေ များတာ။ အတုမြင် အတတ်သင်ပေါ့။
. မောင်အောင် ဒီမှာ ပဲတစ်ဗူး ကို ၂၅ပြား၊ ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ဗူး ၂၅ပြား၊ အမဲသား က ၂ကျပ် ဆိုပါစို့။
တစ်နာရီ လုပ်ခ က ၇ ကျပ်။ တွက်သာကြည့်တော့။
. ကျောက်စ် – သများ က ဘားမီးစ် သွေး စစ်လေ တော့ အဲ ဒီ ဘပ်လဘိုင် ဟင်းကြီး ကို စားမရ။
အဲဟာ ချက်ရင် မသိမသာ တစ်ခြား အကြွင်းအကျန် ရှာ စားရ တယ်။ ကလေး ကတော့ ကြိုက်မှကြိုက် ဘဲ။
ကိုမျိုး – ဒီလောက် အစားပုပ် သလား။ နောက်တစ်ခါ ဘန်းကြီး နဲ့ ပြင်မေးမယ်။ :-))
Mike says: .အမဲသားစင်းကောလည်းဖြစ်..ချင်စပ်လေးပါဆိုတော့ ကြိုက်မှကြိုက်ပါ..ရှလွတ်စ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.